Tallo ku socota xukuumadda Somaliland kuna aadan hirgalinta sharciga socdaalka. |
Tallo ku socota xukuumadda Somaliland kuna aadan hirgalinta sharciga socdaalka.
Muddo laga joogo dhawr weeg ayaa waxa ay xukuumadda Somaliland bilawday dadaalo ay ku xoojinayso kuna dhaqan galinayso xeer-ka socdaalka ee u yaal dalka Somaliland (Xeer Lr.72 ee November 1995). Sababta imika loogu baraarugay waxa ay doonto ha noqotee, ee waxa si baaxad leh umadda Somaliland looga dheehan karayaa in ay aad ugu farxeen una soo dhaweeyeen.
Sideedaba xeerarka amma sharciyada ku aadan socdaalka amma qaxoontiga waxa looga dan leeyahay waa kala saarida muwaadinka iyo ajnabiga oo markaa salka ku haysa sugitaanka dal-ahaaneed maadaama dawlad amma dal waxa lagu noqdaa ugu horayso dadku (population). Sidoo kale, sugida amma qeexida xuquuqda iyo waajibaadka dadka ajnabiga ah ayuu xeerka socdaalku muhiim u yahay.
Hadaba waxa aan nasiib darro wayn u arkaa in madaxdii ina lahayd sharcigaanu dabaqaynaa ay iyagii ka jawaabi kari waayaan cidda ajnabiga ku ah dalka Somaliland oo markaa aad moodaba in suxufiyiintii reer Somalia, iyo cid walboo ku liddi ah jiritaanka dalkeenu, ka dhigteen mawduucan hub ay ku bahdilaan jiritaanka qaranka Somaliland.
Jinsiyada Somaliland waxa qeexaya qodob dastuuri ah (Qod. 4aad), waxa kaloo muhiim ah in dadka reer Somaliland ogaadaan in Somaliland la midawday Somalia iyadoo xeerkeeda jinsiyadeed qeexanyay oo Baarlamankii Somaliland ansixiyeen 23-kii June 1960 (Ordinance No.15 of 1960, eeg Somalilandlaw.com) waana sababta reer Somalia inoogu yeedhi jireyn Soomaali-layner (Somalilander).
Xaqiiqadu waxa ay tahay in dastuur-ka Somaliland qeexayn, haba-yaraate, kala mudnaan ku aadan dadka ajnabiga ah ee ku suggan dalka, sidaa daraadeed qof-ka Ethiopian-ka ah iyo qof-ka Somalian-ka ah (reer Somalia) 2-dooduba waa ajnabi marka la raacayo dastuurkeena. Way dhacda, mararka qaarkood, in dad ajnabi ah oo waddan ku wadda suggani kala mudnaadaan taasina waxa ay ku timaadaa marka ay dalkii dadkaasi ajnabiga ahi kasoo jeedeen iyo dalka ay ku sugganyiin heeshiis ku aadan socdaalka muwaadiniintooda kala saxeexdaan. Sidaynu wada ogsoonay Somaliland iyo Somalia wax heshiis ah oo socdaalka ku aadan may kala saxeexan, mida kale dalka Somalia la yidhahdo jiritaanka Somaliland cadaw ayuuba ku yahay sidaa daraadeed waxaaba xaaran ah oo siyaasada adduunka ugub ku noqonaysa in sida ay Somalia rabto loo raaco oo mar walba madaxdeenu mudnaanta siiyaan sidii ay reer Somalia u raali gallin lahaayeen.
Sharciga socdaalku waxa uu ka mid yahay sharciyada qaranimada muujiya sidaa daraadeed waxa aan usoo jeedinayaa xukuumadda Somaliland, haddii ay daacad ka tahay xoojinta qaranimada Somaliland, tallooyinka hoos ku xusan:
· In xeerka socdaalka ee Jamhuuriyada Somaliland si isku mid ah oo siman u wada qabto dhammaan ajnabiga dalka ku suggan oo ay ku jiraan dadka Somalia kasoo jeeda.
· In passport-radda dalalka shisheeye (foreign passports) si isku wada mida loola dhaqmo amma qaybo (categories) loo kala saaro, sida matalan kuwa Europe iyo Waqooyiga Amerika, iyo kuwa Afrika iyo Aasiya
· In dadka reer Somaliland ee dibadaha daggan, sida bariga dhexe (khaliijka), amma ardayda dalalka dibada wax ka barta ee isticmaala passport-ka Somlia la siiyo kaadh-ka dhalashada Somaliland (Somaliland ID card) si marka ay dalka xuduudihiisa kasoo gallayaan u isticmaalaan kaadh-kaas iyagoo dabcan dalka ay ka yimaadeen iyo passport-ka ay ku dagganyiina masuul-ka socdaalka (Immigration Officer) u sheegaya.
· In dadka reer Somaliland ee dibadaha ku daggan passport-ka Somalia markay dalka kasoo daggayaan, iyagoo markaa lagu xaqiijinayo kaadh-kooda dhalashada, cashuurta laga qaadayaa la mid noqon ta laga qaado dadka reer Somalia ee ay noqoto mid ka hoosaysa maadaama ay muwaadiniin yihiin.
· In ardayda reer Somaliland ee dibadaha wax ka barata ee passport-ka Somalia isticmaala bilaa cashuur wadanka ay kusoo gallaan (dabcan kaadhkooda dhalashada ayaa lagu aqoonsanayaa), taasoo markaas dareenka muwaadin-nimmadooda kor u qaadaysa.
· In dadka Somaliland kasoo jeeda ee passport-radda Europe iyo Amerika sita iyaga lacagta imika laga qaado uun lagu waddo maadaama dalku u baahanyay dakhliga kasoo galla dadkaas.
· In Airport-yada dalka shambaddaha yaala la badilo oo ay markaas noqdaan shambaddo ay ka muuqato haybad qaranimmo. Waa in shambadda Airport-ka taala noqoto fiisihii (visa) dalka lagusoo gallayay maadaama meel kale fiise lagasoo qaadan. Sidaa daraadeed waa in shambaddaasi dalka magaciisu (Republic of Somaliland) ku xardhanaado isla markaana lagu dhiggo muddada uu qofku ku joogi karo dalka iyadoo markaa fursada cusboonaysiintu-na mar walba furantay.
· Ugu dambeyn waa in ay xukuumadda iyo guud ahaan hay-yadaha qaranka Jamhuuriya Somaliland u hawl gallaan oo tacab badan galliyaan sidii ay dadka reer Somaliland ee dibadaha ku daggan passport-ka Somalia ay dalalka ay dagganyiin u oggalaysiin lahaayeen in ay dadkaasi qaataan passport-ka Somaliland.